Lubbuu fi qabeenna Oromiyaa dhabamaa jiruuf kan itti gaafatamu, mootummaa Wayyaanee qofa: Oromoo Sab-bicuutti xiqqeessuu irraa ilaalcha madde. | QEERROO
Lubbuu fi qabeenna Oromiyaa dhabamaa jiruuf kan itti gaafatamu, mootummaa Wayyaanee qofa: Oromoo Sab-bicuutti xiqqeessuu irraa ilaalcha madde.
Posted on March 16, 2017 by Qeerroo
Akka seera addunyaatti, dirqammi mootummaa tokko inni olaanaan, biyya irratti gaafatama qaba jedhamu san keessatti, lubbuu fi qabeenna ummattootaa gaaga’ama seeraan alaa irraa tiksuun nagummaan jiraatee diinagdee isaa akka guddifatuuf haala aanjaa uumuu dha. Mootummaan tokko, ogguu aangoo biyya tokko ofitti fuudhu, dirqama kana akka raawwatu heera biyyaa suni qabatee ummata duratti irbuu seenee hojii eegala. Raawwiin hojii mootummaa tokkos, lubbuu fi qabeennya ummata biyyichaa balaa irraa tiksuu irratti hagam akka hojjeteen ilaalama.
Lubbuu fi qabeenni ummata Oromiyaa, kan balaaf saaxilame, guyyaa gabrummaa Impaayera Ixoophiyaa jalatti kufe irraa eegaleetu. Miniliki Oromiyaa irratti duulee ogguu gabroomfatu, ummata Oromiyaa miliyoona shan lolaa fi dhukkubaan akka fixe ragaaleen seenaa hedduu dha. Dargiin illee akkasuma, qabeenna ummata Oromiyaa saamuu fi saamsisuu, akkasumas, dargaggoo Oromoo afaan qawweetiin manneetii barnootaa fi oomisha adda adda irraa walitti guuruun lola isa hin ilaaletti galchee lubbuu isaan balaaf saaxiluun aangoo irraa jiraachaa ture. Kana malees, ogguu beelli ummata Oromiyaa mudatu, callisee ilaaluun, beelaan akka dhumatan shira hojjechuun lubbuu ummata Oromoo balaaf saaxilaa kan turee dha. Mootummaan Wayyaanee/Aggaamee, ammaan tana aangoo Impaayera Ixoophiyaa harkaa qabu ammoo, ummata Oromiyaa sab-bicutti jijjiiruun gaaffii siyaasaa ummata kanaa gaaffii sab-bicuutti gadi xiqqeessuuf imaammata ifatti labsatee lubbuu fi qabeenna ummata Oromoo balaa dhabamaaf saaxilee argama.
Ardii Afriikaa keessaa, humna waraanaa, hidhannoo fi baay’inaan olaantummaa qabu ijaarratee akka jirutti osoo dhaadatuu, ummata Oromiyaa irratti duulamee lubbuu fi qabeenni isaa oggaa dhabamsiifamu, Lubbuu fi qabeenna ummata kanaa tiksuuf danta dhablummaan mootummaa Aggaamee/Wayyaanee kun, akkuma mootummoota Ixoophiyaa isa dura turanii, jibbansa ummatichaaf qabanii fi ummaticha sab-bicuutti gadi xiqqeessuun, sababa baay’ina isaa irraa gaaffii haqaa kan siyaasaa fi diinagdee ummatni Oromoo akka seenaa fi seeraatti qabu dhabamsiisuun umurii cunqursaa siyaasaa fi saamicha diinagdee Oromiyaa irratti dheereffachuuf imaammata qabani irraa akka ta’e ifatti beekamuu qaba.
Shiftooti ollaa Oromiyaa irraa hidhatanii lubbuu fi qabeenna ummata Oromiyaa oggaa dhabamsiisan, callisuu qofa osoo hin taane gargaaruun, bakki kosii itti gatan, balaa inni lubbuu fi qabeenna ummata Oromiyaa naannoo san qubatu irraan gahuu danda’u dursanii qoratuun ummaticha balaa irraa baraaruuf dursanii tarkaanfii fudhatuu dhabuun, dhumaatii Haroo Arsadee kan bara 2016, haala nyaataa fi dhugaatii ummataa hordofanii ummatni beelaan akka hin gaaga’amneef dursanii midhaan bitanii kuusuun ogguu ummatni beela’u nyaataa fi bishaan dhugaatii dhiyeessuufiin lubbuu isaa baraaruun, bonni beeylada isaa jalaa fixee ummatni Oromiyaa beelaaf akka hin saaxilamneef haala qilleensaa irraa
haalli roobaa maal ta’uuf akka deemu tilmaamuun horiif nyaata kuusuun ogguu roobi caamu horiif margaa fi bishaan dhiyeessuun akka hin dhumne hojjechuun qabeenna ummata Oromiyaa dhabama irraa baraaruu dhabuun, daangaa biyya Eritiraa kutatee Tigraayitti dabalatuuf lola kaaseen dargaggoo Oromoo dura fanjii awwaluun akka irra deeman godhee fixuuni, ABO deggertu jechuudhaan dargaggoo fi shamarran Oromoo egeree Oromiyaa ta’an akka gadamsaa adamsee ajjeessuun karaa irratti fi bosona keessatti gatuuni fi kkf hundi, lubbuu fi qabeenya ummata kanaa dhabamsiisuuf imaammata mootummaan kun hordofu irraa kan madde ta’uu ummatni bal’aan Oromiyaa beekuu qaba.
Kana waan ta’eef, mootummaan gabroomfataa Wayyaanee/Aggaamee, lubbuu fi qabeenna ummata bal’aa Oromiyaa ni tiksa jedhanii abdatuun, Killeen bofaa lukkuu ni dhala jedhanii abdatuu dha. Lubbuu fi qabeenni ummata bal’aa Oromiyaa tikfamee, ummatni kun: bilisummaa, nagaa, badhaadhinaa fi gammachuun jiraachuu kan danda’u, Oromiyaan gabrummaa Ixoophiyaa jalaa baatee fi Mootummaan Walaba Oromiyaa ijaaramee, ummatni bal’aan Oromiyaa, bilisa ta’ee, seeraa fi hooggana: mirga, lubbuu fi qabeenna isaa tiksuufii danda’u yoo tolfate qofa. Mootummaa kana ijaarratee lubbuu fi qabeenna isaatti iggitii godhatuuf karaa takkichi ummatni bal’aan Oromiyaa qabu, qabsoo bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa Adda Bilisummaa Oromootiin geggeeffamu jala hiriiree qabsoo finiinsuun mootummaa gabroofataa lubbuu fi qabeenna ummata Oromoo dhabamsiisaa jiru kana Oromiyaa irraa buqqisuu qofa.
Injifatnoon Ummata Bal’aa Oromiyaaf !